Puntland ma maamul goboleed-baa misa waa dowlad madaxbannaan! - Ahmed Abdihadi
Puntland Maamul Goboleedna ma ah dowlad madaxbannaanna ma ah ee yaa ii sheega sida loo qeexi karo!
Aqoonyahanada iyo indheergaradka Soomaalidu waxay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyaan in uusan ixtiraam u haynin dastuurka iyo heshiisyadii bulsho ee ku yimid geedi socodka dowlnimada kaddib burburkii. Arrimaha Madaxweynanaha lagu eedyo waxaa kamid ah in uusan ixtiraam u haynin nidaamka Federaalka ah.
Haddaba, aan sidan kale u dhigno: haddii u yimaaddo Madaxweyne ixtiraam u haya sarraynta sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka Federaalka ah ma is leedahay Puntland wax ayaa iska beddali?!
Puntland arrimo badan ayaa ka khaldan. Arrinta ugu daran waxay tahay Puntland siyaasiintoodu waxay shacabka u abuuray hayb” identity” Puntland la yiraahdo oo ka weyn Soomalinimada iyo calanka buluugga ah.
Qodobka labaad wuxuu yahay Puntland ixitiraam uma hayso hannaanka dowadda dhexe. Arrinta siyaabo badan ayaan loo caddayn karaa laakiin kan ugu sahlanay waa hadalka maanta ka soo baxay Madaxweynaha Puntland ee ah in aysan “ aqbali doonin” waxkasta oo ka soo baxa wadahadalka dowladda Federaalka iyo Somaliland.
Puntand ma ogo miyaa in ay qayb ka tahay hannaanka Federaalka ee Soomaliland lagula xaajoonayo? Puntland ma ogo miyaa in wasiirka arrimaha dibadda uu yahay reer Puntland, Puntland ma oga miyaa in haddii wada xaajood uu dal shesheeyi masuul ka yahay lagalayo, kali ah ay dowaldda Federaalka in ay xeer u leedahay in gasho?
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa nin nidaamka Federaalka aad u aamminsan markuu talada hayay Puntland lug ayuu ka dhaqaajin waayay!
Puntland ama maqaam dowlad Madaxbannaan ha raadsato ama qayb ha ka noqoto nidaamka Federaalka!
Puntland dhaqan siyaasadeedkeeda in wax laga beddalo ayaa waajib ah.